Canalys inofunga 3,9 mamirioni mayuniti eApple Watch LTE akatengeswa mune ino Q3 | Ndinobva mac
Canalys inofunga 3,9 mamirioni emayuniti eApple Watch LTE akatengeswa mune iyi Q3
Panguva ino zvichiri kuratidzika kuva zvisinganzwisisike kwatiri kuti Apple haigone mabhatiri ane manhamba ekutengesa eApple Watch uye voti mumigumisiro yayo yemari misangano chaiyo yekutengesa nhamba. Mune imwe neimwe yemisangano inoziviswa kuti kutengesa kuri kufamba mushe yekambani yeapuro yakarumwa uye zvinoita sezvisinganzwisisike kwatiri kuti havaite mhedzisiro ive yepamutemo kamwechete.
Panzvimbo pezvo izvo zvatinofanirwa kuita kuvimba nenhamba dzinopihwa kubva kune vanoongorora nemakambani ekunze ayo anoverengera kutumira kuti azive "chaiyo" yekutengesa nhamba. Mune ino kesi zvinoenderana neCanalys fungidziro, Apple Watch LTE kutengesa kunofungidzirwa kungangoita mamirioni 3,9 mayuniti panguva iyi Q3.
Mune ino kesi, iyo Series 3 modhi neLTE ndiyo protagonist huru mumamaki ayo ainopa. Canalys. Aya manhamba kufungidzira kwakashata asi anowanzo kuve akarurama kana achienzaniswa nezvimwe zvishandiso zvinotengeswa neApple. Nhamba dzekutengesa dzakawanikwa neApple dzinodarika idzo dzakawanikwa naSamsun kana Huawei uye dziri padyo neidzo dzakawanikwa naXiaomi kana kunyange Fitbit. Chaizvoizvo aya maviri ekupedzisira hatingataure kuti ndiwo makwikwi akanangana neApple Watch sezvo vari Samsung neGear yayo kana Huawei neWatch yayo, asi izvi zviri kure nekusvika manhamba eApple.
Sekureva kwaApple pachayo yakatsanangurwa kutanga mwedzi uno, Apple Watch kutengesa kwakakura zvakanyanya kubva payakatangwa uye ichi ndicho chinhu chatinongofanirwa kutenda sezvo pasina huwandu hwepamutemo pamhedzisiro yavo yemari. Izvo zvine chokwadi ndechekuti kuwanda uye kuwanda mawonesi anogona kuoneka pamaoko evanhu pamugwagwa, izvo zvinoratidza pachena kuti kutengesa kuri kufamba zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Canalys inofunga 3,9 mamirioni emayuniti eApple Watch LTE akatengeswa mune iyi Q3
Nhema Chishanu madhiri ari kuuya kumaMacOS maapp